Egypta: Nohelohina Ny Renim-pianakaviana Iray Noho Ny Famorany Ny Zananivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2018 3:05 GMT
Tamin'ny 23 May 2008, tao anaty lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe The Victimization of Egyptian Women and Children (Ny Fanaovana ho Lasibatra ny Vehivavy sy ny Ankizy Egyptiana), dia niresaka momba an'i Fantasia aho – tovovavy iray izay nanonofy mba hanana hoavy tsara kokoa ho an'ireo vehivavy Egyptiana – izay nanoratra momba ireo lalàna vaovao izay niadian-kevitra mba hiarovana ny ankizy any Egypta. Ny voalohany tamin'izany dia:
Ny fandraràna ny famorana ny vehivavy na Female Genital Mutilation (FGM) ary ny fiheverana izany ho heloka bevava izay mendrika hosazian'ny lalàna.
Nanohitra izany ny Mpirahalahy Miozolomana ary nilaza hoe:
Tokony havela ho safidy ny Famoràna. Raha maniry ny hitazona ny “fahadiovan'ny” zanak'izy ireo vavy ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ity fomba ity, dia izany no fomba hiarovany azy sy hanapahany hevitra ny amin'izay mahasoa azy!
Tamin'ny fahavaratry ny taona 2008, nandany lalàna manameloka ny famorana ny vehivavy (FGM) ny Antenimieram-Bahoaka ary nanome sazy lamandy mitentina LE 1.000 ka hatramin'ny LE 5.000 ary sazy an-tranomaizina telo volana ka hatramin'ny roa taona ho an'ireo izay rehetra tratra manao ny FGM. Tsy nahitana ny andraikitry ny ray aman-dreny ny lalàna.
Tamin'ny 7 Novambra 2008, namoaka lahatsoratra (AR) momba ny zazavavy 14 taona iray izay nalefa tany amin'ny hopitaly satria nijaly mafy noho ny fandehanan-dra goavana taorian'ny nanaovana famorana azy tsy nahomby ny gazety Al Masry Al Youm. Noho io lalàna voalaza etsy ambony io, nitatitra ny raharaha tany amin'ny tonia mpampanoa lalàna ny hopitaly.
Tao amin'ny Facebook, nisy vondrona antsoina hoe STOP FGM (Atsaharo ny famorana vehivavy) namoaka ny zava-nitranga tao amin'ny sehatra fifanakalozan-dresak'izy ireo ary nanontany hoe:
Iza no tokony homelohintsika? Ny fiarahamonina miaraka amin'ny heviny diso momba ny fivavahana ve? Sa ny governemanta noho ny tsy fahombiazany nametraka ny lalàna? Sa ny dokotera noho ny tsy firaharahiana ny andraikiny ara-maoraly? Sa tokony hanameloka ny tenantsika ve isika – ireo vitsy an'isa malala-tsaina- noho ny tsy fahombiazana tamin'ny fanabeazana ny vahoaka ?
Ny 10 Novambra 2008, taorian'ilay fanapahan-kevitry ny DA mba hanenjehana ilay renim-pianakaviana sy ilay dokotera ihany koa izay voalohany indrindra tao Egypta, dia namoaka hafatra ho an'ireo mpikambana ny mpanangana ny vondrona .
Mitaky fanantenana ity fanapahan-kevitra ity. Raha notsaraina, ary voaheloka i Fayza Ahmed Hussein – ilay renim-piankaviana izay nankasitraka ny famorana – sy Ramadan Abdel Aziz – ilay dokotera izay nanao ny fombafomba – noho ny famonoana olona tsy niniana natao tamin'i Reda Ashry Mohamed, 14 taona dia maro ny reny no nahatsapa fa hohelohina araka ny lalàna izy ireo raha toa ka mikasa hamora ny zananivavy.